Amaphupho okukhuluma efonini, ukuthi yini ongayilindela kuye: ukukhuluma nomama, othandekayo wami, umyeni wami.
Incazelo yamaphupho okhuluma ngawo efonini.
Uma nje ukhuluma ephusheni efonini, lokhu akusona isisekelo sokuhumusha okulungile. Okubaluleke kunazo zonke yizimo ezihambisana nazo. Isibonelo, ukukhuluma nezihlobo, ngokuvamile kubonisa ukuhlukaniswa isikhathi eside, futhi kwezinye izimo kuze kube phakade. Kodwa, akuyona yonke into ehlala idabukisayo ngaso sonke isikhathi, ngakho ake sibheke izimo ezimbalwa ezibonisa ukuthi kungenzeka, okuhle noma okubi, izinguquko ekuphileni.
Amaphupho okukhuluma efonini. Lithini iphupho?
Ngokuvamile, izingxoxo efonini zitshela lo mphupho ngokuthuthuka okusheshayo ekwenzeni umsebenzi. Ukulinda, uma kungenjalo ukukhushulwa, kusobala ukuthi ukwanda kwamaholo. Kodwa, ibhuku lephupho, ukuhumusha izingxoxo zefoni, lithi lezi mpumelelo akufanele zibhekiswe ekucabangeni nasekuseni, cishe, kungumfanekiso kuphela. Umphumela womsebenzi wakho omkhulu. Kwezinye izimo, lokhu kungakusiza ngesidingo esiphuthumayo sokuxazulula izinkinga ezinkulu mayelana nokuphila komsebenzi noma komuntu siqu. Kunoma yikuphi, ingxoxo efonini kufanele ikulungiselele izinyathelo ezizayo ezinomthwalo wemfanelo.
Thola ukuthi ucingo luni, lapha .
Uma ukhuluma efonini nomhlobo oshonile, lokhu kungase kubonise izindaba ezibalulekile noma iseluleko. Kwezinye izimo, iphupho elinjalo lishintsha okuhlangenwe nakho kwakho. Cabanga, mhlawumbe ulahlekelwa othandekayo, futhi ngenhliziyo yakho yonke ufuna ukukhuluma naye.
Khuluma efonini nomama
Ngokuvamile, ukukhuluma efonini ephusheni kuyathembisa ukuhlukana okungathandeki kubantu abaseduze nawe. Inkathazo yukuthi kuyoba uhlobo oluthile lokukhungatheka ebuhlotsheni, mhlawumbe ukungaboni kahle noma ukuphikisana. Cabanga ukuthi ukhona yini okungahambisani nalokhu. Izazi zengqondo nazo zijoyina ukuhumusha kwalophupho. Ngokusho kwabo, uma ubona lokhu, kufanele ucabange kanzima ngobuhlobo obuhlobene, hlala kancane bese ubeka wonke amaphuzu angaphezulu kwe "e".
Ukubona ingane ekhuluma efonini kusho ukuthi ukuxhumana akwanele empilweni yangempela. Kungenzeka ukuthi abangane abasondelene nengane bayahamba futhi wesaba ukuhlala bodwa. Ngokuphambene nalokho, abantu asebekhulile abakhuluma ngefoni ephusheni bayobonana ngokushesha nabangane abaseduze kusukela ebuntwaneni.
Kuthiwani uma intombazane ikhuluma efonini nomthandi wayo?
Zonke izincwadi zokuphupha ziguqukela ngombono owodwa - kubonisa umhlangano oseduze nomyeni wesikhathi esizayo noma uthando lweqiniso. Uma manje usubudlelwaneni, kungenzeka ukuthi maduzane ulindele amasha. Ukulala izithembiso ekuthuthukiseni impilo yakho, kepha isinqumo sokugcina sincike kuwe.
Qiniseka ukuthi unake imizwa nemizwelo yakho. Isibonelo, izincwadi zokuphupha zithi ukukhuluma efonini ephusheni ngenjabulo eyisipesheli kuxwayisa ngokubonakala kwabaphikisanayo, okuzokwenza ukuthi impilo yakho ihambe kancane. Uma ungeke uzwe umuntu, qaphela ukuhleba.
Ngokuvamile ucingo luyi-harbinger yokulahleka. Emva kwamaphupho anjalo, umuntu angashiya impilo yakho empilweni yakho, kodwa lokhu ngeke kufike kumangaze kuwe. Uma ukhuluma efonini ne-ex-isoka, cabanga ngakho, mhlawumbe hhayi yonke imizwa yakho idlulile. Kulesi simo, kufanelekile ukuhlaziya isimo sakho sengqondo. Kuphela ezimweni ezingavamile, ingxoxo yocingo ephusheni ingaba yisiprofetho futhi ibikezele empilweni yangempela.
Njengoba ubona, izingxoxo efonini ephusheni zingasho ukuthi zihluke ngokuphelele, ngokuphambene nezinye izinto. Ngakho-ke, kubalulekile ukubheka izenzakalo ezihambisana nazo, kanye nezici zokuphila kwangempela, ngoba ngokuvamile sivele sibheke izimpendulo ngamaphupho ngezinkinga ezihamba nathi kuyo yonke indawo.
Kungani ngine-eyelashes ende?
Kungani ngiphupha ngencwadi yephupho?
Isaladi nge-sauerkraut kanye noju lwe-agarics
Ukuhalalisela okuhle ngosuku lokuzalwa kowesifazane evesini naseprose
Ama-Meatball e-sauce eluhlaza
Shish kebab kusuka inkukhu fillet
Isikhathi lapho ungafuni ubulili nhlobo